ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေးအမေးအဖြေများ – Healthy Life Journal
Posted on နိုဝငျဘာ 22, 2017
ဒေါက်တာစိုးလွင် သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားသည်။
♦ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကာကွယ်ဆေး♦
Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဘယ်လို ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးလို့ရပါသလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ဆေးတွေ မထိုးသင့်ဘူးလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ထိုးရသလဲဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမသုံးလကျော်သွားရင် ကြိုက်တဲ့အချိန် ထိုးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခါထိုးပြီး ခြောက်ပတ်(တစ်လခွဲ)ကြာရင် ထိုးရပါတယ်။ တခြား ကာကွယ်ဆေးတွေ ကတော့ ကိုယ် ဘာကို ကာကွယ်ချင်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ထိုးလို့ရပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီကာကွယ်ဆေးကို ထိုး လို့ရပါတယ်။ H1N1 တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ရပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ လုံးဝ မထိုးရပါဘူး။ ဒီကာ ကွယ်ဆေးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ထိုးရင် က လေးကို ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိလို့ပါပဲ။
♦ ရိုးရိုးမွေးသင့်သလား၊ ဗိုက်ခွဲမွေးသင့်သလား . . . ♦
Q. ရိုးရိုးမွေးတာနဲ့ ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသလဲ ဆရာ။
A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့၊ ဘယ်မှာ၊ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လိုမွေးမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရပါပြီ။ ဘယ်လို မွေးမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ သ ဘာဝအတိုင်း ရိုးရိုးမွေးတာ ကောင်းသလား၊ ဗိုက်ခွဲ မွေးတာ ကောင်းသလားဆိုတာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် တစ်ယောက်ချင်းပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ သူရဲ့အခြေအနေ ဥပမာ အသက်အရွယ်၊ ကလေးက သားဦးလား စတာတွေကို ကြည့်ရပါတယ်။
ဥပမာ မိခင်တစ်ယောက်က အသက် ၄၀ ဖြစ်နေပြီ၊ အိမ်ထောင်ကျလည်း နောက်ကျပြီး သားဦး ကိုယ်ဝန်လည်း ဖြစ်တယ် . .ဒီလို မိခင်တွေ ရိုးရိုးမွေး ချင်တယ်ဆိုရင် ဆရာတို့က တားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ တားရသလဲဆိုတော့ ရိုးရိုးမွေးတယ်ဆိုတာက ဗိုက်က ဒီမနက်နာတယ်၊ ညနေမွေးမလား မသေချာဘူး။ ညှစ်ရတယ်။ မိခင်က အသက် ၄၀ ရှိနေပြီ၊ ကလေး က သူ့အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အမှားမခံဘူး ဆိုရင် ဗိုက်ခွဲမွေးတာက သူ့အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ မြန်မြန်ခွဲပြီး မြန်မြန်ထွက်သွားရင် အဆင်ပြေတာပဲ။ အသက် ၄၀ ဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကလို ညှစ်အားက ကောင်းချင်မှ ကောင်းတော့မှာ။ အသက် ၂၀-၂၅ နှစ် တို့လို ညှစ်အားက မကောင်းနိုင်ပါဘူး။
ကလေးတစ်ယောက်ကို အရင်က ရိုးရိုးမွေးထားတယ်၊ အခု ဒုတိယကိုယ်ဝန်မှာလည်း သန်သန်မာမာ ပဲ။ မွေးရလွယ်တယ်။ ဒီလိုမိခင်ကို ခွဲတာပိုကောင်း တယ်လို့ ဘယ်ပြောမလဲ။ အရင်ကလေးတွေကို ရိုးရိုး မွေးထားရင် နောက်တစ်ယောက်မွေးရတာ ပိုတောင် လွယ်သေးတယ်။ တစ်ခုပဲ ကလေးက အောက်မှာ အချင်းပိတ်နေတယ်၊ ခေါင်းက မိုးပေါ်ရောက်ပြီး တင်ပါးက အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ခွဲတာ ပို ကောင်းတယ်။
ရိုးရိုးမွေးတာရော ခွဲမွေးတာမှာပါ ကောင်းတာ ရှိသလို ဆိုးတာလည်း ရှိတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး မွေးတယ် ဆိုတာက ကလေးငါးယောက်တောင် လိုချင်တယ်ဆို ရင် သွားမလုပ်နဲ့။ ခွဲမွေးရင် ပထမတစ်ယောက်၊ နှစ် ယောက်ပဲ၊ တတိယကိုယ်ဝန်ဆိုရင် ထပ်မယူနဲ့တော့၊ သားကြောဖြတ်တော့လို့ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ခဏ ခဏ ခွဲပါများရင် သားအိမ်က ပါးပါးသွားတတ်လို့ပါ။ သုံးခါလောက်ပဲ ခွဲရင် တော်ပြီဆိုပြီး ဖြစ်တတ်တယ်။
တချို့ကျတော့ ဗေဒင်နဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် မွေးချင်တယ်ဆိုတာမျိုး ရှိတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ရိုးရိုး မွေးဖို့ ဘယ်လွယ်တော့မလဲ၊ ခွဲမွေးမှ အဆင်ပြေတာ လည်း ရှိပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးမွေးတာ ကောင်း တယ်၊ ခွဲမွေးတာ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး လှေနံဓားထစ် ပြောလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် တစ်ယောက် ချင်း တစ်ယောက်ချင်းပေါ်မှာ မူတည်တာကြောင့် ကိုယ် ပြထားတဲ့ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ သေချာတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
♦ 4D အာထရာဆောင်းကို ကိုယ်ဝန် ဘယ်နှလမှာ ရိုက်သင့်သလဲ . . . ♦
Q. 4D အာထရာဆောင်းကို ကိုယ်ဝန် ဘယ်နှလမှာ ရိုက်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ ဆရာ။
A. ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်နဲ့ ၃၀ ပတ်ကြားမှာ 4D အာထရာဆောင်းရိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးလေးက အကောင်းဆုံး ပေါ်လွင်နေပြီ။ အရမ်းလည်း မငယ်တော့ဘူး၊ အရမ်းလည်း မကြီးသေး ဘူး။ ကိုယ်ဝန် ၃၀ ပတ်ထက် ကျော်သွားရင် ကလေးက ကြီးသွားတော့ ရိုက်ရင် သိပ်မပေါ်တော့ဘူး။ အကြမ်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်ဝန်းကျင်က အကောင်းဆုံးပဲလို့ ပြောကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေးအမေးအဖြေများ (၃) (Women and Diabetes)